Kazakhstan: Lenin. Mbola velona lavitra noho ny fahavelony · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Lenin. Mbola velona lavitra noho ny fahavelony
Voadika ny 17 Septambra 2009 11:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, bahasa Indonesia, English
Hafatra roa mitovy no nisy nandefa tao amin'ny tontolon'ny blaogy Kazakh avy amin'ny lafintany roan'ny firenena. Samy miresaka momba ny fitsanganana tamin'ny matin'ny sary famantarana vanimpotoana iray taloha tany izy roa: ny loha sy ny sandrin'ny tsangambaton'i Lenin. Inona no manosika ireo olona hitodika mankany amin'ny sarin'ny lehiben'ny tolon'ny mpiasa eran-tany? Ny fahatsiarovana ny taloha angamba? Tormozz dia vavolombelona [ru] tamina tranga mahazendana tamin'ny namakivakiany an'i Kazakhstan, izay nitsidihany ny tanànan'i Aralsk, tamina tobin-tsolika iray manokana, ary teo…
“Toy izao i Vladimir Ilyich, mihantona amina tady vavarana!
Raha ny fantatra dia hitan'ireo tompon'ity tobin-tsolika ity teo akaikin'ny Tranoben'ny Kolontsaina tao an-toerana ity sarivongana ity. Novidin'izy ireo 1000 tenge ary dia napetrany eo anoloan'ny fivarotany. Tamin'ny fotoana izay naha-seriny an-dry zareo indrindra no nahitako azy ireo .
Avy eo nosasan'ilay ramatoabe tamina rano mafana tamim-pahamalinana tokoa ilay loha sola *manankasina* . Teo ampisarahanay dia notoroako hevitra izy ireo mba hametaka soratra milaza hoe, “Tobin-soliky ny Saina Mena ho fahatsiarovana an'i V.I. Lenin” .
Ny andro manaraka, teny an-dàlana hody, dia mbola nandalo teo izahay. Nisy mpanao sary sokitra iray efa niasa teo amin'ilay sarivongana, mba hamerina ny orony amin'ny endriny tena izy.
Toy ny lohatenin'ny lahatsorany, pycm ao amin'ny Karaganda dia nampiasa ilay fehezanteny sovietika malaza, izay heverina fa noventesin'ny tsirairay tamin-kafanam-po sy fanandratana tokoa: “Efa nahita an'i Lenin aho!” [ru]:
Fahiny, nisy tranom-panjakana tao aorian'ilay tamboho mivolom-batolalaka. Rehefa kelikely, dia hisy toeram-pamarotana fiara hisokatra eto. Misintona asam-barotra hafa eo an-toerana koa ireo mpandraharaha. Amin'izao dia misy toeram-pivarotana sy fisotroana café eo amin'ilay toerana. Mitirintirina eo ambony tohana eo afovoana tsilalaon-drano kely iray Ilyich, voahodidina voninkazo. Tena mahafinaritra. Ny anaran'ny tompon'ilay trano dia Volodya (fanafohezana ny Vladimir).
Hita any amin'ny neweurasia ihany koa.
2 herinandro izayArmenia
Niantso ny hanaovana fifidianana mialoha amin'ny volana Jona mba hanamaivanana ny krizy ny Praiminisitra Armeniana
26 Febroary 2021Kazakhstan
Tarika hip-hop iray tsy mitendry afa-tsy zavamaneno nentim-paharazana mba hanorenana kolontsaina Kazakhstani vaovao
25 Febroary 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana
Nanao fihetsiketsehana tao Baku ny vehivavy taorian'ny famonoana olona mahatsiravina
Nampiato ny varotra ho an'i Belarosia sy Rosia ny orinasam-pitsikilovana finday Israeliana
30 Jona 2017Azia Atsinanana
Thailandy: Voararan'ny Youtube ny Horonantsary ‘Ilay Mpanao Didy Jadona Lehibe’ an'i Charlie Chaplin